स्मरण क्षमता बढाउने सरल उपाय – eRoyaltimes
विदेशी कै प्रभावका कारण गणतन्त्र आएको हो – किशोर गुरुङ
रोजगारको अभावले युवा मानसिकतामा निराशा
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कुनै समस्या छैन : सभामुख
नेपालमा अहिलेसम्म २४६ जनामा कोरोना संक्रमण, ३५ जना निको भए
ठूला सरकारी अस्पतालमा कै स्वास्थ्य जाँच गर्ने उपकरण ३० वर्षभन्दा पुराना
ललितपुर क्षेत्र नं ३ (क) मा राप्रपाका तर्फबाट सविन खड्का
टेलिकममा दलालीको नयाँ स्वरुप
इस्लाममा दीन र शरीअतको फरक नबुझ्दाको दुष्परीणाम
सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ नीति तथा रणनीति
मधेसी र थारू साथीहरू ! यो संविधान तपाईंहरूको हो ! – गगन थापा
सरकारको डिम्याट अकाउन्ट नभएकाले लगानीको विवरण फरक
अन्तर्राष्ट्रिय करातेमा नेपाल टिम च्याम्पियन
कहिल्यै यस्तो भएको छ कि, तपाईं कुनै ठाउँ वा व्यक्तिको नाम स्मरण गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, तर जति गरेपनि त्यो याद हुँदैन ।
भनिन्छ, उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रो स्मरणशक्ति पनि कमजोर हुन्छ । यस्तो हुनपनि सक्छ । तर, स्मरणशक्तिलाई हामी उमेर ढल्कदै गएपनि तन्दुरुस्त राख्न सकिन्छ । त्यसका लागि केही काइदा छन् ।
गतिविधिका साथ याद गरौं
कुनैपनि गतिविधीसँगै कुनैपनि कुरा याद वा स्मरण गर्ने पद्धती हो यो । यस किसिमको पद्धती अक्सर फिल्मका अभिनेताहरु गर्छन् । यदि तपाई कुनैपनि कुरा मुभमेन्टका साथै गर्नुहुन्छ भने, त्यसलाई याद अर्थात स्मरण गर्न बढी संभव हुन्छ ।
यदि तपाईंले कतै प्रेजेन्टेशन दिनुपर्ने छ र त्यसको तयारी गरिरहनु भएको छ । मानौं, त्यसका लागि तपाईंले नोट पढेर तयारी गर्नु भयो र नाचेर वा शारीरिक हाउभाउ गरेर तयारी गर्नुभयो भने दोस्रो विधी बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
हामी किन मीठो खानेकुरा खान रुचाउँछौं ? हामी किन रमाइला ठाउँहरु घुमफिर गर्न रुचाउँछौं ? हामी किन सिनेमा हेर्न रुचाउँछौं ? हामी किन आकर्षक पहिरन लगाउन रुचाउँछौं ? यी सबैको जवाफ फरक–फरक ढंगले दिन सकिएपनि अन्नत मूल ध्येय एउटै हो, आनन्द । हामी पैसा कमाउन चाहन्छौं, यश आर्जन गर्न चाहन्छौं, […]
नवलपरासीमा ४९ वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण, गण्डकी प्रदेशमा फेरि त्रास
इन्द्रजात्रा, समान दण्डको उदाहरण
Royal Times5years ago
थप ९ जनामा संक्रमणको पुष्टि, दाङमा पनि भेटिए कोरोना संक्रमित
संसारको कुनै धर्मले कलह गराउदैन – स्वामी चन्द्रेश
मनुष्यका सात शरीर